Maitirwo Emabhizinesi Kuwana Vatengi nePokémon Go | Martech Zone
Maitirwo Emabhizimusi Ari Kuwana Vatengi nePokémon Go
Chitatu, Nyamavhuvhu 10, 2016 Douglas Karr
Pokémon Go ndiyo yatove inonyanya kufarirwa nharembozha munhoroondo nevashandisi vezuva nezuva kupfuura Twitter uye pane mamwe mafoni eApple kupfuura Tinder. Pave paine zvakawanda zvekutaura nezve Pokémon Go mubhizinesi renyika uye nemutambo wakave unoshamisa sei boom kune varidzi vebhizinesi. Chinhu chimwe chete changa chisipo kubva mukukurukurirana ihwohwo humbowo-hwakavakirwa kutarisa mashandisiro anoita Pokémon Go vashandisi nemabhizinesi Ndichiri kutamba mutambo.
Slant Kushambadzira kwakaongororwa Pokémon Go vashandisi uye vakawana imwe data inonakidza kwazvo iyo yavakashandura kuita nongedzo inoitisa kune varidzi vebhizinesi iyo inogona kuonekwa mune yavo infographic, Zvinoreva Pokémon Go Zvinogona Kureva Kune Rako Bhizinesi.
Zviwanikwa zvinonakidza kubva kuongororo:
82% ye # Pokémon Go vatambi vakashanyira bhizinesi vachiri kutamba mutambo, uye weavo vatambi vanobvuma kuve ivo chaiko kukwezva ipapo, vangangoita hafu vakashuma ivo akagara kubhizinesi kwemaminetsi anopfuura makumi matatu kana kupfuura.
51% yevatambi vakashanyira bhizinesi kekutanga nekuda kwePokémon Go
71% yevatambi vakashanyira bhizinesi nekuti paive nePokeStops kana maGyms padhuze
56% yevatambi vanotaura vachishanyira emabhizinesi emuno vachitamba zvinopesana nemaketani emunyika
Tags: PokemonPokémon enda
3 Yechokwadi-Nguva Yemukati Yemunharaunda Nzira dzekuwedzera Kubatikana